थप्पड खाएका लामा भिक्षु फुर्वा तामाङको भनाई जस्ताको त्यस्तै -खासमा यस्तो भएको रहेछ ! - Mitho Khabar
थप्पड खाएका लामा भिक्षु फुर्वा तामाङको भनाई जस्ताको त्यस्तै -खासमा यस्तो भएको रहेछ !
May 31, 2022 mithokhabarLeaveaComment on थप्पड खाएका लामा भिक्षु फुर्वा तामाङको भनाई जस्ताको त्यस्तै -खासमा यस्तो भएको रहेछ !
‘कबड्डी-४’ की नायिका मिरुना मगरविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको छ । चाबहिलस्थित केएल टावर नजिकै प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनकारीहरूले नायिका मगरले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।